ယခုအခါအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စျေးကြီးသောအငြိမ်းစား LEGO အစုံ ၅ ခု
23 / 09 / 2021 24 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 792 Views စာ 1 မှတ်ချက် 21027 ဘာလင်, 21310 ဟောငျးငါးဖမ်းဆိုင်, 41340 Friendsတင်ပါးအိမ်, သံ Doom ၏ 70626 Dawn, 70922 အဆိုပါ Joker Manor, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, 8019 သမ္မတနိုင်ငံတိုက်ခိုက်မှုလွန်း, Architecture, အုတ်ခဲ, Creator Expert, ကို eBay, Friends, Ideas, Lego, Lego Architecture, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego Ideas, Lego Ninjago, Lego Star Wars, Lego ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, တင်းပုတ် Windu, မာစတာဆောက်စီးရီး, modular အဆောက်အ ဦး များ, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, နင်ဂျာဂို, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, ရောဘတ် Bontenbal, Star Wars, Star Wars: အဆိုပါ Clone စစ်ပွဲများ, အဆိုပါ Clone Wars, အဆိုပါ Lego Batman Movie,, အဆိုပါ LEGO Group, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, ဆောင်းရာသီစုဆောင်းမှု
အဲဒါကဘဝရဲ့ခက်ခဲတဲ့အချက်တစ်ခုပါ Lego ၎င်းတို့သည်အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်အစုံနီးပါးစျေးနှုန်းမြင့်တက်လေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ဤငါးစုံသည်မည်သူမဆိုမျှော်မှန်းထားသည်ထက်စျေးကွက်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ကိုတန်ဖိုးထားသည်။
လုံလုံလောက်လောက်အချိန်ဖြုန်းပါ Lego ကစားပွဲပြီးသည်နှင့်အလယ်အလတ်ဈေးကွက်တွင်တန်ဖိုးမြင့်တက်ရန်မည်သည့်အရာကခန့်မှန်းသည်ကိုခန့်မှန်းရန်တကယ့်အရည်အချင်းကိုသင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ ကြီးတယ်၊ စျေးကြီးတယ် Star Wars အစုံများ - Ultimate Collector Series နှင့် Master Builder Series မော်ဒယ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သေဆုံးပြီးသား p များဖြစ်သည်art modular အဆောက်အ ဦး များ (သို့) Winter Village အစုံကဲ့သို့ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဆက်မပြတ်စုဆောင်းခြင်း
ဒါပေမယ့်အဲဒီ့ထက်ပိုတဲ့အချက်တွေကသူတို့ရဲ့တစ်ခေတ်ထက်မက၊ မွေးရာပါတန်ဖိုးဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုအချက်တွေမရှိပေမယ့် BrickLink နဲ့ eBay မှာမျက်စိကျစေတဲ့စျေးနှုန်းတွေကိုပေးနေဆဲပါ။ သူတို့သည်မကြာသေးမီကအငြိမ်းစားယူသည်ဖြစ်စေ၊ အလယ်အလတ်ဒီဇိုင်းများကို သုံး၍ ဖြစ်စေ၊ ထင်ရှားသောအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သာဆွဲပါ၊ ဤငါးအုပ်သည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်နောက်ဆုံးစျေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
6 - LEGO Batman 70922 ရုပ်ရှင် Joker Manor
အရေးမပါသော£ ၂၄၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၆၉.၉၉ / € ၂၆၉.၉၉ ကိုလက်လီလက်ကားရောင်းချခြင်းသည် The Out မှထွက်လာရန်အကြီးဆုံးအစုံဖြစ်သည်။ Lego Batman ရုပ်ရှင်သည် ၂၀၁၇ ၌ပြုလုပ်ရန်အနည်းငယ်သောအရာများရှိသည်။ ၎င်းသည် roller coaster track ကိုမိတ်ဆက်ရန်ပထမဆုံး set ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သီးသန့် minifigures များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ယနေ့ထိစွဲမြဲနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ၇၀၉၂၂ The Joker Manor ကရိုးရာ Wayne Manor set ကိုတောင်းဆိုတဲ့ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အပိုင်းကိုခြစ်လိုက်ပြီး TLBM အစုံအမြောက်အများနဲ့သူ့ရဲ့စျေးမြင့်တံဆိပ်တို့နဲ့အတူဖြန့်ချိတဲ့အခါမှာကျေးဇူးအများကြီးမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ယနေ့ရှေ့သို့အမြန်သွားပါ၊ ၎င်းကိုအသစ်ထည့်ရန်အကြမ်းဖျင်းပေါင် ၄၇၀ သုံးရပါမည် အုတ်ခဲမရ။ ၂၀၁၇ မှာဟာသအစစ်အမှန်ဟာငါတို့အားလုံးအပေါ်ပြက်ရယ်ပြုခဲ့တာနဲ့တူတယ်။
5 - Friends 41340 Friendsတင်ပါးအိမ်
Friends အိမ်များသည်အတူတကွသွားကြသည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship နှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ - သင်တွေ့သည့်နေရာတွင်အခြားတစ်ခုကိုသင်သေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စျေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည် 41340 Friendsတင်ပါးအိမ် အားလုံးပိုရှုပ်ထွေးစေ, part၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကသာအငြိမ်းစား ယူ၍ ၎င်းကိုစင်ပေါ်တွင်လျှော့စျေးဖြင့်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ 2018 set ကိုမူလကယူရို ၅၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၆၉.၉၉ / € ၆၉.၉၉ - ယခုသင်စျေး ၀ င်ရန်အကြမ်းဖျင်းယူရို ၁၁၀ ကုန်ကျလိမ့်မည်။ အုတ်ခဲမရ။ ဤစာရင်းတွင်စျေးအကြီးဆုံးသတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်၊ အကြီးမားဆုံးရာခိုင်နှုန်းတိုးခြင်းလည်းမဟုတ်၊ လုံးဝပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်သောပုံစံဖြစ်သော်လည်းချက်ချင်းပင်စွဲဆောင်နိုင်သောပုံစံအတွက်အမှန်ပင်အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
၄ - NINJAGO4Doom of Iron Doom
၇၀၆၂၆ Iron Doom of Doom ၏ Dawn of the Dawn သည်သတ္တမရာသီကိုအခြေခံသည်။ Ninjago တီဗီရှိုး၊ လက်စွဲအချိန်။ သို့သော်၎င်း၏ Snake Mech နှင့်ရှုခင်းအစိပ်အပိုင်းတို့သည်တူညီသောတည်တံ့သောအမွေအနှစ်မဖြစ်နိုင်ပေ Ninjagoအကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအစုံ၊ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၈ ပေါင်အသစ်ဖြင့် ၀ ယ်သည် အုတ်ခဲ.
minifigures များသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိ Time အမွှာနှစ် ဦး သည်လက်ရှိတွင်ပျမ်းမျှပေါင် ၅၇ စီရှိကြပြီး၎င်းတို့အထဲမှာကိန်းဝပ်နေသည်။ Ninjago ယနေ့အထိအခင်းအကျင်း၏အရှားပါးဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအကြီးဆုံး minifigures များ
3 - Star Wars 8019 သမ္မတနိုင်ငံတိုက်ခိုက်မှုလွန်း
၎င်းသည် The Clone Wars ၏နောက်ဆုံးရာသီ၌အကြီးအကျယ်အသားပေးဖော်ပြနိုင်သော်လည်း ၈၀၁၉ Republic Attack Shuttle သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့စဉ်ကလျှမ်းလျှမ်းတောက်မထင်ရှားသော (အလွန်အလှပဆုံးနှစ်သက်ဖွယ်) မော်တော်ယာဉ်၏သေးငယ်သည့်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ minifigures များသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှထူးဆန်းသော Clone Wars ဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်ဆိုသောအချက်မှာဤတစ်ကြိမ်£ ၄၉.၉၉ set သည်ယခုသင်ပေါင် ၂၀၇ အသစ်ကုန်ကျလိမ့်မည်ကိုလေ့လာရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ အုတ်ခဲမရ။ Mace Windu ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာက Revenge of Revenge ရဲ့ post-defenestration minifigure အတွက်တော်တော်လေးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ သံSာဒါဆို ... အဲဒါရှိတယ်။
2 - Architecture 21027 ဘာလင်
နည်းပညာပိုင်း part modular အဆောက်အ ဦး များသို့မဟုတ် Winter Village set များကဲ့သို့တူညီသောစီးရီးတစ်ခု၊ 21027 ဘာလင်၏ဒုတိယစျေးကွက်တွင်ဥက္ကာခဲမြင့်တက်မှုသည် Skylines စုဆောင်းမှုကိုပြီးမြောက်ရန်ရည်ရွယ်သောပရိသတ်များအားရှင်းပြနိုင်သည်။
ဤအစုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့သရုပ်ဖော်ထားသောမြို့များသို့သွားရောက်လည်ပတ်သောသူများကိုဆွဲဆောင်လေ့ရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုအခြားကြာရှည်စီးရီးများနှင့်ယှဉ်လျှင်၎င်းတို့အားလုံးကိုဖမ်းရန်တွန်းအားနည်းသည်ဟုခံစားရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဆိုင်သောတစ်စုံတစ်ရာပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုမခံစားရသော်လည်းယူရို ၂၄.၉၉ set သည်ပျမ်းမျှစျေးသစ် ၁၆၃ ဒေါ်လာသို့ရောက်ရန်ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသေးသည်။ အုတ်ခဲ.
1 - Ideas 21310 ဟောငျးငါးဖမ်းဆိုင်
21310 Old Fishing Store (နှင့် Lego Ideas ပန်ကာဒီဇိုင်နာ Robert Bontenbal ၏ကပ်လျက်အယူအဆများ) သည်မှတ်တမ်းတင်စရာကောင်းလှသည်၊ သို့သော်ဤ crowdsourced set များနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာ၎င်းသည်မကြာသေးမီက modular အဆောက်အ ဦး များပင်စင်ယူပြီးနောက်အနားယူခြင်းမှ၎င်းအားတန်ဖိုးထားပုံရသည်။
၂၀၁၈ နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားမယူမီ£ 139.99 / $ 149.99 / € 149.99 ဖြင့်ရောင်းချခြင်း၊ အပိုင်း ၂,၀၄၉ သည်ယခုအသစ်ထပ်မံ ၀ ယ်ယူရန် ၃၆၀ နီးပါးကုန်ကျလိမ့်မည်။ အုတ်ခဲမရ။ ၎င်းသည်၎င်း၏လက်လီစျေးနှုန်းထက် ၁၅၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်သည်၊ ထို့ကြောင့်စင်ပေါ်တွင် ၂၁၃၁၀ Old Fishing Store ကိုသိုလှောင်ထားသူမည်သူမဆိုယခုအလွန်ပျော်ရွှင်ရမည်။
← LEGO သည်အွန်လိုင်းကြိုတင်မှာယူမှုများရပ်ဆိုင်းထားပုံရသည်
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ - ကမ်းခြေရှိ Surfers များ →
တစ်ခုမှာ "စျေးကွက်၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စျေးကြီးသောအငြိမ်းစား LEGO အစုံငါးခု"
ဘယ်လိုလဲ ideas delorean လား။ ၃၀ မှ ၃၀၀